Wararkii ugu danbeeyay ee Dagaal Faraha loogu gubtay oo ka dhacay Sh/Dhexe | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu danbeeyay ee Dagaal Faraha loogu gubtay oo ka dhacay Sh/Dhexe
Wararkii ugu danbeeyay ee Dagaal Faraha loogu gubtay oo ka dhacay Sh/Dhexe
Wararka ka imaanaya Deegaanka Basra ayaa sheegaya in Duleedka Deegaankaasi ay ku dagalameen Ciidamada Dowladda federaalka oo garab ka helaya AMISOM iyo Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhigyo Ciidamada Huwanta ah ay ka sameysteen inta udhaxeyso Gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose oo dhawaan ay kala wareegeen Al-Shabaab.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay la wareegtay Deegaanka Basro iyo deegaano kale oo Degmada Balcad Hoos tagta, waxayna hadalka ku dareen in ay Xubno iyaga katirsan ay Goob fagaare ah kala hadleen dadka Deegaanka sida ay hadalka u dhigeen.
Saraakiil Katirsan Ciidamada Dowladda ayaa Warbaahinta u sheegay in ay iska caabiyeen Dagaalkii ay ku qaadeen Dagaal yahanada katrisan Al-Shabaab, waxayna beeniyeen Sheekada Xarakada ee ah in Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen fariisimihii ugu dambeeyey ee ay la wareegeen.
Dadka Deegaanka oo iyane la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in dadkii deegaanka ku sugnaa ay barakaceen, kadib markii Furumo dagaal ay deegaanadaasi noqdeen.
Roobkii ugu dambeeyey oo jaray Wadooyinka Basro ayee sheegeen in uu saameeyey wadooyinkii ay ugu baxsan lahaayeen iska hor imaadka, inkastoo aysan sheegin waxyeelo ka gaartay dagaalka.
Wararka Caawa ka imaanaya Degmada Balcad ayaa sheegaya in dhaq-dhaaqyo ay halkaa ka jiraan, waxaana Wada Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo Al-Shabaab.
Ciidamada Dhaq-dhaqaaqyada sameynaya ayaa ah Ciidamadii Dowladda ee dhawaan loo diyaariyey in ay dagaal ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Xarakada Al-Shabaab.